Mamorona orinasa mitazona orinasa? Fitantanana ny fihazonana eny amoron-dranomasina na any ivelany?
MANARAKA NY INDRINDRAO
MPIASA MANATAKA AZY ARY IANAO INDRINDRA
FIDULINK dia mpitarika frantsay miteny frantsay amin'ny fitantanana Holding in the World, miaraka amin'ny zavatra niainany mihoatra ny 10 taona tao amin'ny sehatry ny banky sy ara-bola ary koa ny fitantanana orinasa iraisampirenena. FIDULINK hitondra fampiononana sy fahatoniana anao eo amin'ny fitantanana ny fitantanana oniversite na eny ivelany.
Mpitantana Francophone iray natokana ho anao HOLDING
Ny mpitantana Holding rehetra anay dia manana fahalalana tonga lafatra amin'ny sehatry ny toekarena, ara-dalàna ary ara-bola mba hahatratrarana ny tsirairay amin'ireo antenainao.
FIDULINK manome ny mpanjifany miaraka amin'ny Holding a dedicated space access and secure from their smartphone or computer.
Fanohanana vita amin'ny fametahana ny fananganana na fananganana ny anao Nihazonako , ireo solotenanay nanolo-tena sy ny ekipa ara-dalàna sy ara-bola dia eo am-panolorana hevitra anao hanolotra anao ny torohevitra tsara sy vahaolana tsara indrindra hanatanterahana ny fampiharana ny Nihazonako tena fahombiazana.
NY FAHAFATESANA ARY ATSIKA
Manana tanjona ianao, faniriana ary sanda ihany koa mba hamaliana ny fanantenanao rehetra azontsika atao amin'ny fangatahana tsotra hikarakarana ny fitantanana anao Nihazonako Offshore ou ONSHORE. Ny biraonao nanolo-tena manokana amin'ny fitantanana ny Nihazonako hitondra anao ny vahaolana rehetra ahafenoana ny andronao.